Lungiselela iMac yakho kunye noGqirha ococekileyo Pro, kwintengiso yexeshana | Ndisuka mac
Abo basebenzisa iikhompyuter ze-Apple Mac bayazi ukuba sijamelene nezixhobo ezinamandla nezisebenzayo, kangangokuba naluphi na ulungelelwaniso olusisiseko lwayo nayiphi na imodeli esele ingaphezulu kuneemfuno zomsebenzisi ophakathi, kwicandelo endizibandakanya nam. Nangona kunjalo, ngelixa oku kungasentla kuyinyani, kuyinyani ukuba iiMac azifezekanga.
Ukugcina iikhompyuter zethu zilungile ngumsebenzi olula kakhulu, kodwa yintoni ekufuneka yenziwe. Ngokuhamba kwexesha, kunye nokusetyenziswa, kuqokelela isixa esikhulu se "junk", iifayile ezingafunekiyo ezithatha indawo, iicookies, iimbali zokukhangela kunye nezinye izinto ezininzi eziza kwenza ukuba iMac yethu ingakwenzi kunye nosuku lokuqala. Njengenye yezona zisombululo zibalaseleyo koku, namhlanje sibonisa uGqirha ococekileyo Pro, into elungileyo ekwayiyo ithengiswa ixesha elincinci kakhulu.
1 Gcina iMac yakho ihlaziyiwe nguGqirha ococekileyo Pro, kwaye uzigcinele ii-euro ezintlanu
2 Ndingenza ntoni ngoGqirha ococekileyo?
2.1 Isilungisi seMemori eSebenzayo
2.2 Ukucoca ifayile yeJunk
2.3 Isoftware engafakwanga
2.4.1 Phinda uMfumani weFayile
2.4.2 Ingxelo yexesha lokwenyani yengxelo yezempilo: ukusetyenziswa kwenethiwekhi kunye nokusetyenziswa kweCPU
2.4.3 Umhlalutyi weFayile enkulu
Gcina iMac yakho ihlaziyiwe nguGqirha ococekileyo Pro, kwaye uzigcinele ii-euro ezintlanu
Ivenkile yeMac App igcwele ngeeapps ezithembisa ezona zininzi ukucoca ngokukuko, ukusebenziseka kunye nokugcinwa kweekhompyuter zethu zeMac. Ngamanye amaxesha kuyinyani, kwaye ngamanye amaxesha akunjalo. Umzekelo, eyaziwayo Coca iMac yam Yenza oko ikuthembisayo kwaye, ngokoluvo lwam, yeyona ilungileyo ikhona, ubuncinci phakathi kwabo ndizamile. Kwinxalenye yayo, UGqirha oCoca Pro ayikude ngasemva; Andazi ukuba iyakuba "sisicelo sokuqala sokwenza iMac", njengoko kubonisiwe ngabo banoxanduva, kodwa into eqinisekileyo kukuba yenye yezona zilungileyo, kwaye ixabiso layo lifikeleleka ngakumbi kunezinye izisombululo ezifanayo.
Ku "Ndivela kwaMac" sihlala sikunika izixhobo ezininzi zolondolozo kunye nokwenza ngcono iMac kwaye ngenxa yesi sizathu, namhlanje siyangqinelana nesipho esitsha esazisa ngaso iiholide zePasika.
UGqirha oCoca Pro Yiyo ukucoca ngobuchule, isixhobo kunye nesixhobo sokugcina iikhompyuter zethu zeMac kananjalo kubandakanya ukuphinda kabini ukufumana kunye nesicelo esingafakwanga. Ngelixa kwiVenkile yeApple uya kufumana usetyenziso olwahlukeneyo olwenza ngokwahlukeneyo imisebenzi, nge UGqirha oCoca Pro uya kuba nayo yonke into kwi-app enye.
Ndingenza ntoni nge UGqirha oCoca Pro?
Njengoko benditshilo ngaphambili, UGqirha oCoca Pro Yiyo isixhobo esinamandla kakhulu kwaye kubandakanya izinto ezahlukeneyo zokucoca, ukugcinwa kunye nokusebenza kweekhompyuter zethu ze-Bitten Apple.
Isilungisi seMemori eSebenzayo
Unokwenza ugcino lwenkumbulo ngokucofa kanye imouse njalo njalo buyisa ngokukhawuleza imemori esetyenzisiweyo ngokusetyenziswa okuvaliweyo, ke iMac yakho iya kusebenza kakuhle ngakumbi. Ukongeza, usetyenziso ichonga ezo zicelo zisebenzisa isixa esikhulu sememori.
Ukucoca ifayile yeJunk
Le yenye yeempawu zam endizithandayo; kuyamangalisa ukuba ungaphumelela kangakanani isithubar, ngakumbi ukuba awuzange "usebenze" enye yeziapps kwi-Mac yakho:
Ukucocwa kweDiski ekhawulezileyo kwimenyu yebar yendawo engatshintshiyo.
Ukucocwa kweefayile zethutyana, kubandakanya izingodo, i-imeyile, i-iOS kunye neefayile zethutyana ze-iTunes, njl.
Ukuchongwa kweefayile ezisele emva kokususwa kwezicelo.
Ukucoca inkunkuma kwindawo yokugcina enokususwa.
Ulawulo olulula lwazo zonke usetyenziso olufakwe kwi-Mac yakho.
Ukuboniswa ngokulula nangokucacileyo kwalo lonke ulwazi malunga nezicelo ezifakwe kwi-Mac yakho.
Uluhlu lwazo zonke izicelo ezifakwe kwi-Mac yakho ngegama, ubungakanani, kunye nomhla wokugqibela wokuvulwa.
Ukususwa ngokulula nangokugqibeleleyo kwezicelo ezikwi-Mac yakho (kubandakanya iifayile ezishiyekileyo ezinxulumene nezo zicelo).
Phinda uMfumani weFayile
Ngendlela "epheleleyo kwaye ekhawulezayo", yenza u khangela yonke inkqubo yokuqalisa ifolda ukwenza "ukhetho olukrelekrele noluchanekileyo" njengoko iifayile eziphindiweyo zikhethwe ngokwamagama abo kunye nomxholo wabo. Ukongeza, unokuthatha isigqibo phakathi kokucinywa okusisigxina okanye ukubathumela kwindawo yokuphinda usebenzise kwakhona kuqala.
Ingxelo yexesha lokwenyani yengxelo yezempilo: ukusetyenziswa kwenethiwekhi kunye nokusetyenziswa kweCPU
Umhlalutyi weFayile enkulu
Umsebenzisi unako yenza ubungakanani ngokwezifiso ukuqala nge-10 MB kunye nokuqala ukuskena ngokucokisekileyo ukusebenzisa izihluzi ezahlukeneyo, Ikwiifayile zalapha ezivumelaniswe efini.
UGqirha oCoca Pro Inexabiso eliqhelekileyo le- € 14,99 kodwa ngoku, kwaye kangangexesha elincinci, ungayifumana nge- € 9,99 kuphela. Thatha ithuba lesibonelelo kwaye uzame.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » Iinkqubo zeMac » Lungiselela iMac yakho noGqirha ococekileyo Pro, kwintengiso yexesha elincinci
kwaye ujike iMac yakho ibe ngumatshini ocothayo olilisayo !!!